Instapage: Ny vahaolana PPC rehetra sy ny vahaolana amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny doka | Martech Zone
Amin'ny maha mpivarotra azy, ny votoatin'ny ezaka ataontsika dia ny manandrana manondro ny varotra, ny marketing, ary ny hetsika momba ny dokam-barotra izay nalainay mba hamindrana ireo vinavinantsika mandritra ny dian'ny mpanjifa. Ireo mpanjifa ho avy dia saika tsy hanaraka lalana madio amin'ny alàlan'ny fiovam-po mihitsy, na dia mahatalanjona aza ny zavatra niainany.
Raha resaka dokam-barotra anefa, mety ho lafo be ny vidin'ny fandraisana… noho izany manantena izahay ny hanery azy ireo hahafahanay mijery sy manatsara ny valin'ny fampielezan-kevitra. A sehatra fitobiana matetika aparitaka ho an'ity. Ireto misy tombony 5:
Tombontsoa amin'ny pejy fitobiana
mari-pankasitrahana - amin'ny alàlan'ny fihazonana ireo pejy fipetrahana lavitra ny lalan'ny fiovam-po hafa, afaka mahazo fahatakarana mazava momba ny fiverenantsika amin'ny fampiasam-bola dokambarotra isika.
Behavior - amin'ny famerana ny fiaraha-miasa amin'ny loharano hafa, manentsina ny safidy sy ny hetsika ataon'ny vinavinantsika isika, hahazoana antoka fa hiovaova kokoa izy ireo fa tsy hizaha.
tsotra - amin'ny alàlan'ny famolavolana pejin-tsidina tsara sy haingana ary tsotra, dia ampitomboinay ny fiovan'ny mpitsidika, na inona na inona fitaovana.
Fitantanana fitarihana - ny fahaizana manamarina mora foana, mitahiry, manolotra, manisy lalana ary mamaly ny fitarihana rehefa mameno ny fisoratana anarana.
Testing - amin'ny alàlan'ny fampiasana sehatra iray izay mampiditra metodista fitiliana, dia afaka manaparitaka lohateny, atiny, tsanganana ary endrika hafa izay mampiakatra ny taham-panovana amin'ny statistika isika.
Ohatra amin'ny pejy fitobiana
Mariho ny toetra mampiavaka ny pejy fidinana tsotra etsy ambany - nihena ny fivezivezena, singa mifanohitra matanjaka, fiantsoana tokan-tena, lohateny, topimaso ary teboka bala… izay mitondra ny mpampiasa hiova fo:
Ity misy fampidirana video sy topy maso ny Ampidiro ny sehatry ny pejy fitobiana:
Fampisehoana lozisialy momba ny pejy fitobiana
Ny mpamorona namboarina tanteraka an'i Instapage dia ahafahan'ny orinasa mamorona pejy fipetrahana mahavariana sy mampiova fo. Miaraka amin'ny fanitsiana singa misy ifotony, endritsoratra maherin'ny 5,000, ary sary 33 tapitrisa hiara-miasa, ny mpanorina pejy fampidirana Instapage dia manaisotra ny fanaintainana noho ny famokarana pejin-kaonty marika-namana, fiovam-po. Anisan'izany ny:
Fandrafetana modely miorina amin'ny tranga indostria sy fampiasa - 200+ modely namboarina sy namboarina tanteraka natao hampitomboana ny fiovam-ponao.
Fiaraha-miasa eo amin'ny pejy hita maso - Miaraha miasa mivantana amin'ireo mpiara-miasa aminao sy mpanjifa ara-potoana handaminana ny fizotran'ny famerenana endrika. Ataovy haingana kokoa ny famoronana, famerenana, famoahana ary fanovana haingana kokoa ireo pejinao.
Form Builder - Manampia endrika azo ovaina miaraka amina saha maromaro, lisitra midina, na bokotra radio amin'ny tsindry vitsivitsy monja. Manangom-baovao mora foana avy amin'ny fanantenanao amin'ny alàlan'ny famadihana ireo endrika sarotra ho dingana maro. Ahenao ny teboka fikorontanana ary asao ny mpampiasa hifandray amin'ny marikao.
Fitantanana fitarihana - Mitahiry, bypass, export, na làlana mankany amin'ny Instapage na ampidiro ary ampitao amin'ny CRM na fampidiranao hafa. Mahazoa mailaka sy fampandrenesana amin'ny dashboard rehefa manome fitarihana vaovao ianao.
Hafatra fanamafisana - Ataovy miavaka ny hafatra fanamafisana izay miseho rehefa feno ny mpitsidika ny takelakao.
Misaotra anao & Pejy fanamafisana - Ampahafantaro ireo mpamandrika vaovao anao fa mankasitraka ny tombotsoany izy ireo rehefa avy nandefa ny mombamomba azy ireo tamin'ny endrika safidinao miaraka amin'ny pejy fisaorana amin'ny marika.
Famindrana nomerika nomerika - Tehirizo ny dingana ataonao amin'ny alàlan'ny fametrahana rafitra fanateram-bola nomerika mandeha ho azy. Miaraka amin'ny tsindry vitsivitsy azonao atao ny manome antoka fa rehefa misafidy ny tolotra ianao dia omena azy ireo misintona avy hatrany.
Instablocks - Manamboara pejy fitateram-bahoaka an-jatony haingana amin'ny alàlan'ny fampiasana sakana pejy tsirairay izay azonao atao ny manamboatra, manavotra ary mampiasa indray. Misafidiana santionany amin'ireo modely fanakanana efa nomanina, toy ny lohateny, footer, fijoroana vavolombelona, ​​ary maro hafa, na mamorona sakana manokana ho anao.
gadget - Ampiasao mora foana ny sosona fiasa ao amin'ny pejinao misy ny widgets.
Mobile Blocks - Mamorona pejy fitobiana mamaly amin'ny finday amin'ny tsindry iray monja. Ho an'ny fanaingoana bebe kokoa, azonao atao ny manafina ireo bikan'ny pejy mba hijerena ny finday hamoronana traikefa fitetezana tsara kokoa. Ampitomboy ny fiovam-po amin'ny alàlan'ny famoronana ny traikefa finday mety ho an'ny mpitsidika anao, fa tsy mampiasa developer.
Global Blocks - Mitantana môdely eran-tany amin'ny ezaka mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny marika ny pejy rehetra. Manamboara Instablocks misy marika manokana, toy ny lohateny, footer, na barazy azo ampiasaina amin'ny pejy an-jatony na an'arivony. Avy eo, amboary sakana iray indray mandeha ary asehoy ny fanovana nataonao isaky ny pejy miseho ilay sakana.
Fampivoarana ny fisintomana sy ny endrika fisamborana - Mamorona pop-ups azo ovaina miorina amin'ny tsindry manokana miaraka amin'ny OptinMonster, mpamatsy lozisialy rindrambaiko mipoitra fivoahana, mba hampitomboana ny tahan'ny fiovam-po amin'ny pejin-tranonao.
Fonta manokana (Google & Typekit) - Ny endritsoratra manokana dia ahafahanao mampiseho ny mombamomba ny marika. Ny Instapage no hany sehatra manome fidirana amin'ireo Webfonts 5,000 100+ premium mihoatra ny XNUMX heny mihoatra ny safidna endritsoratra noho ny rindrambaiko pejy fipetrahana rehetra eny an-tsena.
Image Asset manager - Ampio ary amboary ny sarinao ao amin'ny fitaovana famoronana pejy fampidirana Instapage mba hahalasa bebe kokoa ny fampiroboroboana na ny tolotra omenao.
Fanandramana misaraka A / B an'ny mpizara - Araraoty ny pejy fitobianao ho an'ny fiovam-po miaraka amin'ny fahaiza-manao fitiliana A / B na amin'ny pejin-tranonkalanay mahazatra na amin'ny pejy AMP. Araho ny fihetsiky ny mpitsidika, miovaova ny fanandramana misy singa, lamina ary / na endrika vaovao, ary ampitomboy ny tahan'ny fiovam-ponao.
Pejy fitobiana AMP - Manamboara pejy finday izay mitondra entana eo noho eo, mamorona traikefa fitetezana tsara kokoa, ary mitondra fiovam-po bebe kokoa miaraka amin'ny pejy fitetezana mandeha amin'ny herin'ny Google AMP. Instapage dia manana ny mpamorona tokana mamela anao hamorona sy hizaha ny pejy fitsapana A / B amin'ny fampiasana ny rafitra AMP, tsy mila mpamorona izany.
Mampidira sy misintona ny môdely - Mampakatra haingana sy mora ny modely avy ThemeForest (na mamorona anao avy amin'ny rangotra). Sintomy hizara an'izao tontolo izao ny volavolanao.
Overwrite Protection - Hatsarao ny famokarana sy ny fandefasana ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny fisorohana ireo mpampiasa tsy hanoratra ny asan'ny tsirairay.
Versioning - Avereno ireo kinova taloha momba ny pejy fitokanana mba hisian'ny fandriam-pahalemana rehefa mamorona, mamolavola na manova.
Sarintany hafanana - Heatmaps dia manome fomba fijery amin'ny antsipiriany momba ny fomba ifandraisan'ny mpitsidika anao amin'ireo pejin-tranonao. Ity dia mampahafantatra anao tsara kokoa ny momba ireo singa ao amin'ilay fitsapana A / B.
Analytics amin'ny fiovam-po - Ampifandraiso mivantana amin'ny Google AdWords sy Analytics ho an'ny fanondroana mora kokoa ary ataovy hitan'ny masontsivana eo amin'ny sehatra Instapage ny fandrefesana ny vola lany isaky ny mpitsidika sy ny vidiny isanisany. Avy eo, ampitao ny metadata mitarika mankany amin'ny CRM na rafitra automatisation marketing.
Fanarahana Tracking Pixel - Mampiasà fanarahana piksela fampidinana an-tsokosoko hanarahana ny fiovam-po ivelany na ho an'ireo mpitsidika mamerina mametra izay tsy miova amin'ny pejin-tranonao.
Fampiangonana pejy ho an'ny fitantanana fampielezan-kevitra - Nanamora ny fitantanana fampielezan-kevitra ny Instapage ka ny mpivarotra PPC dia afaka manangana vondrona doka haingana ho an'ny fantsom-panafody, vokatra, endrika ary demografika samihafa.
Tatitra ara-potoana - Makà angona amin'ny fotoana tena izy, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fitaovanao rehetra, amin'ny fotoana rehetra.
Personalization - Mamorona vetivety ny fanandraman-tsoratry ny pejin'ny tsindry 1: 1 isaky ny mpihaino miaraka amin'ny Experience Manager. Ankafizo ny mpanjifanao amin'ny traikefa manokana momba ny pejy izay hanampy anao hampitombo ny fiovam-po, hampitombo ny ROI fanaovana dokambarotra nomerika, ary hampihena ny vidin'ny fahazoana.
Integrations - Ampifandraiso mora foana ny Instapage miaraka amin'ny doka ampiasain'ny antoko fahatelo, ny analytics, ny CRM, ny mailaka amin'ny marketing, ary ny sehatra automatique marketing.
Manomboha amin'ny Instapage
Anisan'izany ny lozisialy momba ny lozisialy
Ho an'ny Pay Per Click (PPC) sy ny maso ivoho fanaovana dokam-barotra, ny Instapage no vahaolana Agence tonga lafatra koa. Ny endri-javatra ho an'ny masoivoho dia:
Kaonty Master - Mitantana kaonty mpanjifa marobe amin'ny alàlan'ny fifanakalozana eo anelanelan'ny kaontinao raha tsy mila miditra amin'ny kaonty samihafa ianao. Jereo ny lisitry ny kaonty azonao idirana, mifamadika amin'ny kaonty tianao iasana, ary jereo ny fampahalalana momba ny kaonty / tompona ny kaonty izay tafiditra ao anatin'ny sehatr'isa mitambatra ianao.
Sehatra fiasa tsy miankina ho an'ny mpanjifa - Alamino ny sehatr'asan'ny ekipa, tantano tsara kokoa ny fifandraisan'ny ekipa, ary tazomy ny tsiambaratelon'ny mpanjifa amin'ny fanasana ireo mpikambana ao amin'ny ekipa amin'ny sehatr'asa manokana. Azonao atao ny manome haingana ny fidirana amin'ny sehatra famoahana amin'ny sehatr'asa manokana, mitantana ny fampidirina manokana ary mamoaka amin'ny CMS ivelany amin'ny alàlan'ny rafitra token.
Fahazoan-dàlana ho an'ny mpikambana ao amin'ny ekipa - Ny fizarana ny asanao amin'ny ekipa na ny mpanjifa dia tsy midika intsony hoe mandalo ny fampahalalana momba ny fidiranao. Miaraka amin'ny Instapage, afaka manome mora foana ny fidirana amin'ny mpamaky ekipa na mpiara-miombon'antoka marina ianao, ho an'ireo pejy fitobiana mety.
Famoahana amin'ny domains tsy voafetra - Tsy toy ny sehatra fananganana pejy hafa, Instapage mamela anao hamoaka pejy amin'ny sehatra miavaka maro manerana ny rafitra fitantanana atiny maro.
Mangataha Demo Instapage
Fampahafantarana: Mampiasa ny rohy mpampifandray ahy aho Instapage, Themeforest, ary OptinMonster Eto.
Tags: pejy fitobiana dokasehatra fidirana an-tserasera masoivohopejy fanentananaanalytics fanovanampanamboatra endrikagoogle adwordsInstapagefampidiranafiantsonana pejympamorona pejy fanangananaohatra amin'ny pejy fipetrahanapejy fisoratana anaranapejy fanatsarana pejysehatra fitobianafitarihana firakaendrika fisamborana firakapop upppc